Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण विकृति र विसंगतिको पक्षमा लौरी समाउँदै सांसद थापा : भन्छन्, ‘सरकारविरुद्ध लडाई शुरु गर्छौं’
विकृति र विसंगतिको पक्षमा लौरी समाउँदै सांसद थापा : भन्छन्, ‘सरकारविरुद्ध लडाई शुरु गर्छौं’
९ कार्तिक २०७६, शनिबार १०:३१
काठमाडौँ, ९ कार्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद गगन कुमार थापा एक पछि अर्को गर्दै प्रायःजसो सरकारको विरोधका नाममा विकृति, विसंगति तथा अनियमिततालाई संरक्षण गर्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ ।
कहिले डा. गोविन्द केसी, कहिले भिटेन र दुर्गेशलगायतका हजारौं विकृति र विसंगतिलाई मौलाउने प्रकारका गतिविधि गर्ने मानिसको लौरी समाउँछन् । उनी लौरीमात्र समाउँदैनन् कि सरकार विरुद्ध लडाई शुरु गर्ने चेतावनी समेत दिन्छ । जुन सडक र सदन दुवै हुन्छ भनि विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा कार्यक्रममा गएर जनताको माझ बोल्ने गर्छन् । झुटको खेतीमा नै रमाउँछन् ।
यसै सन्दर्भमा शुक्रवार मेलम्चीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा गायक दुर्गेश र भिटेन पक्राउका सवालमा सरकारले आम नागरिकको बोल्ने अधिकारलाई बन्देज लगाएको उल्लेख गरे । आम नागरिकले बोल्न, लेख्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो तर त्यसको सिमा निर्धारण हुन्छ । जुन दुई गायकका गीत तथा व्यवहारले समाजलाई कुन बोटोमा डोर्याउँछ ? यो उनले बुझेर पनि बुझ पचाएको स्पष्ट देखिन्छ जुन उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट ।
उनले मेलम्चीको कार्यक्रममा भने, “पशुपति शर्माबाट सरकारले आफूसँग असहमति राख्ने गितसंगितमाथि धावा बोल्ने कुरा अहिले अरू दुईजना गायकलाई पक्राउसम्म आयो । भोलि तपाईंको घरआँगनसम्म आइपुग्न सक्छ । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकतर्फ लक्षित गर्दै सरकार नागरिकको मुख थुन्न उद्दत रहेको छ । सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको र नगर्नुपर्ने काम जति सबै गरेको छ । त्यसैले छठपछि संसदमा सरकारले ल्याएका जनविरोधी विधेयकका विरूद्ध लडाइँ सुरू हुने छ ।”
उनको यो भनाईबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकारले देशमा भएको विकृति, विसंगति, अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, हिंसालगायतका कार्यहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुहुँदैन । आफ्नो पार्टीको राजनीतिक आडमा भइरहेका जघन्य अपराधलाई लुकाउने र दोषजती सवै सरकालाई देखाउने प्रायः उनको बानी नै हो । यतीमात्र होइन उनी अमेरिकी एजेन्ट भएको सप्रमाण समेत प्रष्ट रुपमा सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।
भनिन्छ, ‘भिरबाट लडेको गोरुले जे भेट्यो त्यही समात्छ ।’ उक्त भनाइको चरितार्थको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् गगनकुमार थापा । आफ्नो क्षेत्रमा सवारी साधनसम्म गुड्न नसक्ने गरी हिलाम्मे सडक, धुलाम्मे सडक छन्, जसलाई व्यवस्थित गर्न तथा देश र समाजको निम्ती विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न त कुरै नगरौं, कि उनको दिन रात नै कहाँ बाट सरकारको आलोचना गर्न पाउँ भनेर प्रार्थना नै गर्ने गरेको देखिएको छ ।
उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरेका भ्रष्टाचार तथा कालोबजारीका समेत चर्चा परिचर्चा भएका छन् । विपि कोइराला अस्पताल धरानमा भिसि नियुक्त गर्दा होस् यात स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा औषधी खरिद प्रकृयामा भएका अनियमितता । यी त उनका सामान्य उदाहरणमात्र हो ।